Mootummaan Naannoo Somaalee Buqqaatota 665,000 Qubachiisuuf Jedha
Bitootessa 23, 2019
Hoogganaan waajira hoji-geggeessa yaaddoo balaa bulchiinsa naannoo Somaalee – Mohammed Faattah, Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin, bulchiinsi naannoo Somaalee qaamota isa tumsan ka biroo waliin tahuudhaan, buqqaatota kuma dhibba jahaa fi kuma jaatamii shan kanneen akka dhaabbataan qubachiisuuf karoorfate dubbatan.
Buqqaatota kana keessaa irra-jireessi sababaa walitti-bu’insaatiin kanneen handaara daangaa naannoolee tii buqqa’an waan tahaniif, yeroo nageenyi mirkanaa’u gara qehee isaaniitti deebi’u – jedhu. Kanneen Oromiyaa keessaa buqqa’anii gara naannoo Somaalee dhufan garuu, fedhii isaanii irratti hundaa’uudhaan yoo gara Oromiyaatti ka deebi’uu hin feene tahe, dhaabbataadhaan naannoo Somaalee keessa qubachiisuuf akka karoorfatan eeran – Obbo Mohammed Fattah.
Rakkoon isaa kan abboota siyaasaatiin rakkoo uummata gidduutti uumame miti – ka jedhan – Obbo Mohaammad, bulchiinsi isaanii otuu mootummaa federaalaa irraa gargaarsa hin eegiin, ka dursee buqqaatota qubachiisuun karoorfatee hojjtetaa ture tahuu dubbatu. Karoora bulchiisa naannoo tii alas, sadarkaa federaalaatti karoorri bahuu isaa dubbatu.
Ijaarsii yuniversitii Booranaa Akkuma Aadoyyee Durattiin Deemuutti Jiran, Bara 2020 Barannoota Jalqabuuf Hujiitti Jiran Jedhan
Walitti Bu'iinsa Daangaa Benishaangul Gumuz fi Oromiyaa Jidduutti Uumamee Ture Furuuf Araarri Geggeeffame
Bulchiinsi Magaala Sulultaa Manneen Keenya Diigufi Jedhu Jiraattonni
Imbaasiin Itiyiiphiyaa Daar E Salaam Jiru Lammilee Itiyoophiyaa Hidhaa Jiran Hiiksisuu Jalqabe
ABO fi KFOn Mootummaan Ajjeechaa fi Hidhaa Lammiilee Nagaarratti Raaw’ataa Jiru Dhaabuu Qaba Jedhu
Sirnii Awwaalcha Meejar Jeneraal Gabra Medhin Faqaaduu Har’a Gaggeeffamee Jira
Polisiin Fedeeraalaa Aara Himiimaansu Gadhiisuun Shakkame Mana Mutiitti Dhiyaateera
Jeneraalli Waraanaa Itiyoophiyaa Duraanii Mana-hidhaatti Du’an
Itiyoophiyaa fi Caama Mudate
Waraanni Kaaba Itiyoophiyaatti Geggeessame Tuurizimii Magaalaa Laalibalaa Miidhe
Gaazexeessaa Muheyidin Abdullahii To'anna Jala Erga Oolfamee Torban Darbe: Maatii
Obbo Abdii Raggaasaa fi Obbo Gadaa Gabbisaa Mana-hidhaatti Dhibeef Saaxilamanii Wal’aansa Hin Arganne, Jedhu Maatiin Isaanii
Embaasiin U.S Tarkaanfiin Itiyoophiyaan Gabaasaa Ze Ikonoomist Irratti Gaddisiisaa Dha, Jedha